The ụwa Venus: ihe niile ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Venwa Venus bụ ụwa nke abụọ site na Anyanwụ na anyị Usoro anyanwụ. Enwere ike ihu ya n’uwa dika ihe na enwu gbaa n’eluigwe, mgbe Anyanwu na Onwa gachara. A maara ụwa a site na aha kpakpando ụtụtụ mgbe ọ pụtara na ọwụwa anyanwụ mgbe ọwụwa anyanwụ na kpakpando mgbede mgbe a na-etinye ya na ọdịda anyanwụ mgbe anyanwụ dara. N'isiokwu a anyị ga-elekwasị anya na njirimara niile nke Venus na ikuku ya ka ị nwee ike ịmụtakwu banyere mbara ala dị na mbara igwe anyị.
Chọrọ ịma ihe niile gbasara Venus? Na-agụ reading
1 Idebe mbara ala Venus
4 Igwe ojii na ihe ha mejupụtara
Idebe mbara ala Venus
N'oge ochie, a maara kpakpando mgbede dị ka Hesperus na kpakpando ụtụtụ dị ka Phosphorus ma ọ bụ Lucifer. Nke a bụ n'ihi anya dị n'etiti orbits nke Venus na fromwa site na Sun. N'ihi oke anya, Venus a naghị ahụ ya anya karịa awa atọ tupu ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ awa atọ mgbe anyanwụ dara. Ndị na-enyocha mbara igwe n'oge gara aga chere na Venus nwere ike ịbụ akụkụ abụọ dị iche iche.
Ọ bụrụ na ekiri teliskop, mbara ụwa nwere usoro dịka Ọnwa. Mgbe Venus nọ na njedebe ya enwere ike ịhụ ya pere mpe ebe ọ bụ na ọ dị n'akụkụ nke kachasị anya site na Sun site na Earthwa. A na-erute ogo nchapụta kachasị elu mgbe ọ na-arị elu.
Usoro na ọnọdụ nke Venus nwere na mbara igwe ka emegharịrị na oge mmekọrịta nke afọ 1,6. Ndị na-enyocha mbara igwe na-ezo aka na mbara ala a dị ka mbara ụwa nwanyị nke ụwa. Nke a bụ n'ihi na ha yiri oke nha, dịka oke, njupụta, na olu. Ha abụọ mebere n'otu oge wee si na nebula mechie. Ihe a niile na-eme Earth na Venus yiri mbara ala di iche-iche.
A na-eche na, ọ bụrụ na ọ nwere ike ịdị otu anya site na Sun, Venus nwere ike ịnabata ndụ dịka ụwa. Ebe ọ bụ na ọzọ dị na mbara igwe, ọ ghọla ụwa dị iche na nke anyị.
Venus bụ ụwa nke na-enweghị oke osimiri na ikuku siri ike gbara ya gburugburu nke kachasị mejupụtara carbon dioxide na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara vapo mmiri. Igwe ojii bụ sọlfọ sulphuric acid. N'elu mmiri anyị na-ezute ikuku nke ikuku juru okpukpu iri itoolu na abụọ karịa ụwa anyị. Nke a pụtara na mmadụ nkịtị enweghị ike ịnọ otu nkeji n’elu ụwa a.
A makwaara ya dị ka mbara ala na-achasi ike, ebe ọ bụ na ihu igwe nwere okpomọkụ nke ogo 482. Ọnọdụ ndị a na-akpata site na nnukwu mmetụta griin haus nke ikuku na oke ikuku dị. Ọ bụrụ na arụpụtara griinụ na ụwa anyị iji jigide okpomọkụ na ikuku dị gịrịgịrị, cheedị mmetụta okpomọkụ nke ikuku ikuku ga-enwe. Ikuku nile jidere ikuku ma ghara iru oghere. Nke a na-eme ka Venus dị ọkụ karịa ụwa mercury ọ bụ ezie na ọ dị nso na Anyanwụ.
Otu ụbọchị na Venusian nwere ụbọchị 243 ma dị ogologo karịa afọ 225 na ya. Nke a bụ n'ihi na Venus na-agbagharị n'ụzọ dị iche. Ọ na-eme site na ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ, na-abụghị ụzọ na mbara ala. Maka onye bi na mbara ala a, ọ nwere ike ịhụ etu Anyanwụ ga-esi ga ọdịda anyanwụ na ọdịda anyanwụ ga-ewere ọnọdụ n’ọwụwa anyanwụ.
Planetwa nile kpuchiri ya na igwe ojii ma nwee oke ikuku. Igwe dị elu na-eme ka ọmụmụ ihe sitere na ụwa sie ike. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọmụma niile e nwere banyere Venus enwetala site na mbara igwe nke nwee ike ịgbada na nnukwu ikuku ahụ na-ebu nyocha. Kemgbe 2013 E duziri ozi iri anọ na isii na mbara ụwa na-acha oke ọkụ inwe ike ịchọtakwu ihe banyere ya.
Ihe ndị dị n’ígwé ahụ bụ ikuku carbon dioxide. Igwe a bụ ikuku griinụ dị ike n'ihi ike ya ijigide okpomọkụ. Ya mere, ikuku ndị dị na mbara igwe enweghị ike ịkwaga na mbara igwe ma hapụ okpomọkụ ahụ gbakọtara. Cloudgwé ojii ahụ dị 50 kilomita site n’elu ala na ahụ dị na igwe ojii ndị a bụkarị sọlfọ sulphicic acid. Wa enweghị oghere magnetik a na-ahụ anya.
Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 97% nke ikuku bụ CO2 abụghị ihe ịtụnanya. Ọ bụkwa na ala ya nwere otu ụdị ma ọ bụ dị ka nzu nzu. Naanị 3% nke ikuku bụ nitrogen. Mmiri na alụlụ mmiri bụ ihe dị obere na Venus. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-eji arụmụka na, na ịbịaru Sun nso nso, ọ na-agbadata mmetụta griin haus siri ike nke na-eduga n'apịtị nke oké osimiri. Atọm hydrogen dị n'ụmụ irighiri mmiri nwere ike tufuru ohere na ikuku oxygen dị n'akụkụ ahụ.
Ohere ozo enwere ike iche na Venus nwere obere mmiri site na nmalite okike ya.
Igwe ojii na ihe ha mejupụtara
Sulphuric acid dị n’igwe ojii kwekọrọ na nke dị n’ụwa. O nwere ike ịmepụta ọmarịcha anụ ọhịa na stratosphere. Acid na-ezo na mmiri ozuzo ma na-emeghachi omume na ihe ndị dị n'elu. Nke a na ụwa anyị a na-akpọ mmiri ozuzo acid ma ọ bụ ya na-ebute ọtụtụ mmebi gburugburu ebe obibi dịka oke ọhịa.
Na Venus, acid ahụ na-amịkọrọ na ala ígwé ojii ma ghara ịdaba, kama ọ na-anọ na mbara igwe. Elu nke igwe ojii na-ahụ site na andwa na site na Pioneer Venus 1. Ga - ahụ etu o si gbasaa dịka ọkụ kilomita iri asaa ma ọ bụ iri asatọ n’elu elu ụwa. Igwe ojii nwere mmerụ na-acha odo odo ma na-achọpụta nke ọma na wavelengths dị nso na ultraviolet.
Esemokwu ndị dị na sọlfọ dioxide ọdịnaya dị na mbara igwe nwere ike igosi ụdị mgbawa na-arụ ọrụ na mbara ala. N’ebe enwere ịta ahụhụ ka elu, ugwu mgbawa nwere ike ịdị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara ụwa ọzọ na Sistemụ Igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Venwa Venus
Echiche tectonics tiori